Loltuu - BBC News Afaan Oromoo
BBC News IgboBBC Afaanoromoo
Mata-duree qabduu dabalataa Qulqulleessituu qabduu dabalataa
...tti maxxanfame 4:24 1 Muddee 20214:24 1 Muddee 2021
Biyyooti addunyaa Afrikaatti buufata waraanaa ijaaruun maaliif dorgomu?
Biyyooti jajjaboo addunyaa US, Chaayinaa fi Raashiyaa Afrikaatti dhibbaa waraanaa, siyaasaa fi diinagdee gochuuf wal-dorgomu
QoodiView more share options
Waa'ee geessituuwwan kanneenii dabalata dubbisi
...tti maxxanfame 10:32 24 Sadaasa 202110:32 24 Sadaasa 2021
Hayilee Gabrasillaaseefi Fayyiisaa Leellisaa dabalatee namoonni beekamoon kaan adda waraanaatti duuluuf
Atileetii Itoophiyaa dirree dorgommii Olimpikiirratti beekamu Haayilee Gabrasillaaseefi Fayyiisaa Leelliisaa fa'i dabalatee namoonni bebbeekamoon kaaniis, waraana kaaba Itoophiyaan dirree waraanaatti duuluuf karoora akka himuutii gabaafame.
...tti maxxanfame 5:46 24 Sadaasa 20215:46 24 Sadaasa 2021
Laayibeeriyaatti beeksisa qacarrii loltootaa 200f dubartoonni 7,000 ol dhiyaatan
Waraanni Laayibeeriyaa Ameerikaadhaan leenjii'uu xiqqoon dabalataan miseensoota 200 ta'an qaxxaruun baayyina isaa guddisuuf beeksiisa baase. Beekisisichaanis imaammata haaraa wal qixxummaa saalaa mirkanneessuu jedhun walllakkaan isaanii dubartoota akka ta'u gaafata.
...tti maxxanfame 6:32 22 Sadaasa 20216:32 22 Sadaasa 2021
Waraanni Sudaan, Abdallaa Hamdook aangoo isaanii duraanitti deebise
MM Abdallaa Hamdook hidhaa mana keessaa gadhiifamuun isaanii mormii uummatni bulchiinsa waraanaarratti gaggeessu dhaabsisuu hin dandeenye.
...tti maxxanfame 7:53 18 Sadaasa 20217:53 18 Sadaasa 2021
Waraanni Itoophiyaa ciminaan beekamaa ture akkamiin humnoota TPLF mo'achu dadhabe?
Waraanni Itoophiyaa Afrikaa keessa waraana cimaa kanneen jedhaman keessaa tokko ture. Akkamiin finciltoonni yeroo gabaabaatti bakkeewwan to'achuu eegalan?
...tti maxxanfame 6:35 14 Sadaasa 20216:35 14 Sadaasa 2021
Mormii Sudaaniin namoonni shan dabalataan ajjeefamuun gabaafame
Sudaan keessatti leelliiftoonni demokraasii guyyaa Sanbataa mormiif bahan shan ajjeeffamu Koreen Jidduugala Doktaroota Sudaan beeksiise.
...tti maxxanfame 9:47 12 Sadaasa 20219:47 12 Sadaasa 2021
Jeneraalli waraanaa Ameerikaa tasgabbii dhabuun Itoophiyaa 'naannichaaf balaadha' jedhan
Jabuutitti ajajaa waraanaa Ameerikaa kan tahan Mejar Jeneraal Wiiliyaam Zaanaa, magaalaan Finfinnee finciltootaan yoo to'atamte rakkoo namoomaa hamaatu dhalata jechuun BBCtti himan.
...tti maxxanfame 8:35 12 Sadaasa 20218:35 12 Sadaasa 2021
Abdel Fattaa al-Burhaan hogganaa Sudaan yeroof gochuun of muudan
Burhaan mana maree haaraa hundeessan keessaa miseensota siivilii mana maree mootummaa ce'umsaa kana duraa diigan keessa turan haqaniiru.
...tti maxxanfame 9:04 4 Sadaasa 20219:04 4 Sadaasa 2021
Waggaa 1ffaa Waraana Tigraay: Akkamiin jalqabee har'a gahe?
Waraanni Sadaasa 04, 2020 keessa bara darbe naannoo Tigraayitti eegalamee amma gara naannoolee ollaa Affaar fi Amaaraatti babal'ate akkamiin eegalee as gahe? Odeessi addatti qophaa'e kun duraa duuba taatewwanii isinitti agarsiisa
...tti maxxanfame 6:51 4 Sadaasa 20216:51 4 Sadaasa 2021
Saawudii fi UAEn fonqolcha Sudaan mormuun, mootummaan siviilii akka deebi'u gaafatan
Saawudii fi UAEn kan kana dura dureewwan waraana Sudaan deeggaraa turan, amma fonqolchi raawwatame hafee mootummaan siivilii bakka akka deebi'uuf waamicha yoo taasisan yeroo jalqabaatiif.
Page 1 Keessaa 8